Tsy jeren'ny Leixlip ny renirano Liffey any avaratra atsinanan'ny County Kildare, 17km andrefan'ny Dublin. Andramo ny manjono amin'ny iray amin'ireo toerana angling salmon mahafinaritra ary ankafizo ireo ravina tsara tarehy ao amin'ny Leixlip Castle. Mandehana mankany amin'ny Hotely Leixlip Manor hijerena ireo zaridaina tsy misy fangarony, mijanona amin'ny fahalianana amin'ny maritrano fantatra amin'ny anarana hoe Wonderful Barn na mandeha mitsangatsangana manamorona ny Royal Canal Way - mankafy fitsaharana miala sasatra amin'ity toerana mahafinaritra ity.
Leixlip dia miorina amin'ny firaisana amin'ny renirano roa, The Rye & the Liffey. Ireo dia niforona teo amin'ny sisin-tanin'i Celtic taloha any Irlandy ary ny tanàna dia manondro ny anarany hatramin'ny Vikings izay nonina teto tamin'ny taonjato faha-9. Leixlip Castle, toerana mimanda Norman, dia mijanona eo afovoan'ny tanàna ankehitriny ary efa tompon'ny fianakavian'i Guinness nanomboka ny taona 1958. Ny Guinness teo aloha, Arthur, dia nanomboka ny fivarotana labiera voalohany tao Leixlip tamin'ny fampiasana ireo làlambe hizarana ireo entana mainty ho an'ny besinimaro. Ity no teboka fanombohana mety indrindra ho an'i Arthur's Way, lalana 16km taorian'ny ain'i Arthur hatramin'ny nahaterahany ka hatramin'ny fahafatesany.
Topi-maso any Leixlip
Zavatra tsara folo hatao manodidina ny Leixlip & Celbridge
Manontania olona eo an-toerana: Aiza no hitondrana mpitsidika ao Kildare?
Jereo bebe kokoa amin'ny Leixlip